U-Ale noFranz izinwele zezinwele zabesifazane eMessina
U-Ale noFranz wezinwele uDonna Messina
Ama-Aesthetics Nobuhle Bezinwele Zakho
4.9 /5 amavoti (amavoti angama-7)
U-Ale noFranz Izinwele Zabesifazane a Messina inamava omuhle kakhulu kwezindlela ezithile zokwelapha ze cura ka capelli, ezenza lesi sikhungo sibe yiphuzu langempela lereferensi ye izinzwa futhi i ukunakekelwa kwesithombe.
Abaluki bezinwele eMessina - EKS Specialised Consultants
U-Ale noFranz izinwele zezinwele zabesifazane eMessina bangabacebisi abakhethekile I-Ekperience: ngenxa yokusebenzisa a ikhamera kathathu ngokukhulisa amahlandla angama-300, sikhomba izinkinga ezivame ukubhekana nazo ku isikhumba. U-Ale e UFranz wezinwele inikeza amakhasimende ayo izeluleko trichological ngokucophelela nangokucacile, okwenza le nsizakalo ibe yinhlonipho yesikhungo. Izindlela zokwelapha ezitholakala salon yethu yile:
Ubusuku be-EKSperience: iqiniso elisha emhlabeni Inhlala-kahle. Ngezindlela zokwelapha ezibandakanya ukubhucungwa komzimba at isikhumba, uzothola insiza yokuphumula ekhethekile ngokukhumbula ukuthi inhlalakahle iqala ngqo ukusuka ekhanda.
I-EKSperience Party: amaqembu okungenani abantu abane abafuna ukuchitha isikhathi ndawonye benakekela eyabo capelli futhi i ukulungisa, ukugcina i-salon kuphela.
Umbala Harmony Kwenze Wena: inkambo mini kulabo abathanda ukubaphatha capelli ekhaya futhi bafuna izeluleko zochwepheshe ekukhetheni nasekudaleni okusha kwabo bheka.
Amaqembu okungenani 4 abantu inkonzo yakusihlwa kusuka ngo 19:00 kuya ku 22:00 Ngesikhathi sokuqokwa.Amaqembu okungenani 4 abantu inkonzo yakusihlwa kusuka ngo 19:00 kuya ku 22:00 Ngesikhathi sokuqokwa.
Izinwele Woman Isazi Colour Harmony
U-Ale noFranz Izinwele Zabesifazane a Messina bangabachwepheshe Umbala Harmony: Nikeza izeluleko eziphelele kumakhasimende ekudalweni kwe Bheka kufaneleke ngokwengeziwe, kucatshangelwa isici ngobuhle e morphological futhi ngaphezu kwakho konke ngokuhumusha isakhi kangcono Ubuntu. Umphumela uba bheka kwanele, kukhululekile kuwo wonke amathuba futhi kunakwa imininingwane, njenge i Amakhosi d'isithombe bangakwenza.
Umsebenzi Wokwakhiwa kabusha Kwezinwele kanye ne-Hot Keratin Seal
U-Ale noFranz Parrucchieri Kwabesifazane a Messina, ngaphezu kwama-aesthetics abamba iqhaza ngokuqondile esithombeni sowesifazane, kungumsebenzi wezindlela zokwelapha zangempela Wellness usebenzisa i- I-Thalassotherapy, ukwakhiwa kabusha kwe- izinwele, ukwelashwa kwezibulala-zinambuzane ed isandiso. Ngosizo a Seal keratin a UCaldo, ochwepheshe bethu bavimbela ukuphindeka kwe izihlukaniso zokugcina, ngaleyo ndlela ugweme ukufingqa ubude bakho izinwele. Kwakho izinwele, ngemuva kokwelashwa okuthatha amahora amathathu kuzovela luminosa, ithambile, delicata ukuthinta futhi kuzogcina goqa isikhathi eside.
U-Ale noFranz Parrucchieri - uHairstyle noBridal Makeup
U-Ale noFranz Izinwele Zabesifazane a Messina zinikeza amakhasimende abo uchungechunge lwezinsizakalo, okwaziswa ngokwengeziwe ngokuhamba kwesikhathi. Phakathi kokuceliwe kakhulu, i Uhlelo Lomuntu Olwenzelwe Nguwe (I-PPS) ozohlela ukwelashwa kwe-salon capelli e viso ngesikhathi, nokunakekela ukunikezela di amawigi, ukuhlanganisa e trucco kwesithombe sakho esijwayelekile.
Izinsizakalo ezintsha zokuqamba: "I-Glitter Tattoo" nokwenza imibala ngegloves ngeHyaluronic Acid
Il Isaluni yezinwele kaDonna Ale noFranz ihlala isesikhathini ngezindaba zakamuva nezitayela stile e ubuhle, siphakamisa insizakalo entsha ye "I-tattoo ekhazimulayo"yenziwe ngokuphelele ngesandla, ukugqamisa eyakho isithombe. Ngaphezu kwalokho, lapho ucela ungakhetha nesixazululo se imibala yakho Capello, ngokusebenzisa IHyaluronic acid, okuzokwenza izinwele zakho kukhanya ukubapha tonicity, ukuqina, ukusilika e ukukhanya. Izosebenza futhi ezimweni a Igilavu konke 'IHyaluronic acid ezandleni zamakhasimende, ukuze ngihlolwe izinzuzo yalokhu okusha ukwelashwa futhi esikhunjeni, okuzovela iphinde yamanzi e ithoni ngemuva kwesikhashana esincane kusuka kuhlelo lokusebenza.
Ikheli: Via Consolare Valeria 11 / F
Ucingo: 347 2317942
Ucingo: 090 2924806
Inombolo ye-VAT: 02622510838